Alakamisy faha-12 mandavantaona – Trinitera Malagasy
Ankasa 2 Mpanjaka 24, 8-17/Salamo 78
Tsy ankasa Jenezy 16, 1-12.15-16/Salamo 105
Md Matio 7, 21-29
“Ity no vavahadin’ny Tompo, ny marina no mahazo miditra eo” (Salamo 118, 20).
Hiditra amin’ny vavahadin’ny famonjena, hoy Izaia Mpaminany (Izaia 26, 1-6), izay mitana ny fahamarinana ka tsy mivadika, ary hahazo fiadanana kosa izay matoky ny Tompo. Izay maniry ny fiadanana dia mahafantatra fa tsy vokatry ny finiavany no hahombiazany fa fahasoavana, ary satria iriny fatratra ny hiadana dia hosanatriaviny ny handraraka ilo mby an-doha. Mariky ny fitiavana ny fitahirizana izay fanomezana noraisina avy amin’ilay tia. Dia izay no andrasan’Andriamanitra amintsika: hitahiry ny fanomezany amin’ny alalan’ny fitoriantsika ny hatsaram-pony. “Ataovy antso avo fa tsara ny Tompo, fa mandrakizay ny fitiavany” (Sal 118, 1.29).
Mahalasa saina ihany anefa ny lazain’io salamo 118 io ao amin’ny andininy 19: vohay ny varavaran’ny fahamarinana hidirako hisaotra ny Tompo. Iza no antsoin’ny mpivavaka hamoha ny varavarana? Olona afaka manome baiko hamoha ny varavarana izany dia tsy vahiny fa tompon-trano. Tsy izay mahay misolelaka sy be vava anefa no hiditra ao, hoy ny Evanjely fa izay mahay mampifanaraka ny fiainany amin’ny sitrapon’ilay tompon-trano. Tompon-trano izay “manao ny sitrapon’Andriamanitra izay any an-danitra”.
Misy olona mieritreritra fa manao zavatra amin’ny anaran’ny Tompo. Lazain’i Jesoa aza hoe misy mirehareha fa naminany na mandroaka demony na nanao fahagagana tamin’ny anarany, nefa indrisy fa tsy hiditra amin’izany fiadanan’ny Fanjakan’ny lanitra izany. Nahoana no lazain’i Jesoa fa “mpanao ratsy” (ἀνομία anomia, tsy tan-dalàna)? Ny Lalàna (nomos) dia nomen’Andriamanitra mba hahasambatra ny zanany rehetra, ka izay tsy mikatsaka ny fahasambaran’ny tenany sy ny hafa rehetra dia “anomia”, tsy ara-dalàna, ka tsy ny nahavita heloka be vava ihany no ratsy fa izay tokony hanao soa koa nefa tsy nanatanteraka izany. Indraindray manko tsy ny hahasambatra (ny tena sy ny hafa) no hanaovan-javatra fa ny mba hisehosehoana sy hizahozahoana. Fa inona moa izany hoe miditra amin’ny fanjakan’ny lanitra izany? Mila esorina ao anatin’ny loha aloha ny fiheverana fa zavatra mahakasika ny fiainana aorian’ny fahafatesana ny Fanjakan’Andriamanitra. “Izay mino no hanana ny fiainana mandrakizay” hoy i Jesoa (Md Joany 6). Ny varavaran’ny finoana no hidirantsika amin’ny fifandraisana amin’Andriamanitra, hoy kosa ny Papa Benoit XVI, ary tsy afaka ny handingana io tokonana io raha tsy mandray ny Teny voatory ary manaiky hovolavolain’ny fahasoavana ny fo ka hiova (Porta fidei 1).
Ny fiainana araka ny Tenin’ny Mpampianatra araka izany no hanorenana ny fiainana mandrakizay eo ambony vatolampy (Mt 16, 18). Adalana hoy i Jesoa ny fihainoana ka tsy hitandremana ny Teniny, satria io no manoro antsika ny Lalàn’Andriamanitra, ny Lalàn’ny Fitiavana. Indraindray tokoa manko misy olona mihevitra fa fanandevozana, na sanatria an’izany, fahalemen-tsaina ny fanarahana ny sitrapon’Andria­manitra. Tsy azo adinoina anefa fa ny sitrapony dia tokana ihany: ny hahasambatra antsika! Araka izany, ny fanarahana ny Teniny sy ny fiainana araka ny didiny dia fizorana ho amin’ny fahasambaran’ny tena ihany. Tsy hanenenana mandrakizay izany satria mafy orina.
Ary matoa isika tsy manatanteraka ny sitrapony dia nivily lalana, nanorina ny trano ambony zava-mandalo ihany ka na ho ela na ho haingana tsy maintsy ho latsa-panenenana eny ihany. Tahaka ny fasika, hoy i Jesoa: ny fasika manko dia eny amin’ny toerana ambany indrindra no anajanonan’ny rano azy ho antsanga, ary rehefa tonga ny rano manaraka dia mbola miova toerana avy eo ihany koa, mandeha amin’ny ambanimbany kokoa. Izay tsy manorina am-pitiavana dia ho tototry ny fitiavan-tenany ihany na ho ela na ho haingana.
I Jesoa no ilay Teny tonga nofo, “lalana tokan’ilay paradisan’ny Ray”, hoy ny hirantsika. Ny fianarana Aminy no hahafahantsika manandrana ny hamamin’ny fiainana ao amin’ny Fanjakan’Andriamanitra. Ny demony aza mba mino ihany koa fa mangovitra, hoy Md Jakoba (Jk 2, 19), satria tsy mifanaraka amin’ny fitiavan’Andriamanitra. Hitombo ao amintsika anie faniriana hihaino, hahazo ka hampihatra amin’ny fiainantsika ny Teny Fiainana.